Eygaygii waa la waayey, bisadaydu way carartay, xayawaankeygu wuxuu leeyahay jab laakiin ma diiwaangashan! | Internationale Hunde & Katzen Datenbank
Waxaan ahay quus, maxaan sameeyaa hadda?
Sidee la ii soo ogeysiin karaa markii xoolahayga la helo?
In la maqlo taas oo ah milkiilaha xayawaanka, laakiin gaar ahaan sida xayawaanka jecel, had iyo jeer waa cabsi!
Xaqiiqdiina rajo xumadan dadku waxay ahayd meeshii go’aanku gaadhay sanadkii 2005 markii aan go’aansanay inaan helno “Chipzentrale”. Macluumaad loogu talagalay xayawaanka guryaha lagu keydiyo oo aad ku keydin karto lambarka microchip aad ugu jeceshahay iyo faahfaahinta xiriirkaaga.
Hadday tahay fasax ama guriga.
Macluumaadkaaga waxaa looga yeeri karaa meel kasta oo adduunka ah 109 luqadood.
24 saacadood maalintii – 7 maalmood usbuucii – 365 maalmood sanadkii.
Ku dar gacaliyahaaga keydkeena keydkeena maanta, maxaa yeelay “Ka wanaagsan amaan ka xumahay”
The ujeedada kaliya ee ah “xarunta chip” waa in ay keenaan dadka iyo xoolaha wada gadaal sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah in ay “dhacdo ah shil” .
Waana wax iska fudud: Adigu waxaad iska diiwaangelisaa gacaliyahaaga halkan oo waxaad gashaa faahfaahinta xayawaankaaga iyo faahfaahinta xiriirka ee aad jeclaan lahayd in lagu ogeysiiyo marka xayawaankaaga la helo.
Dhammaan xogta hadda waxay ku keydsan yihiin adeegeena aaminka ah, waxaana lagu heli karaa wakhti kasta adigoo raadinaya , adduunka oo dhan , iyo 109 luqadood !
Xarunta Chip – ammaan waa aamin
Si aad u cadeyso:
Websaydhadeenu ugu horreyn waa mashiin raadinta xayawaanka maqan!
Sida caadiga ah, ma jiraan “astaamo” xayawaan ah oo lagu daabaco websaydhkayaga!
Adiga kaliya ayaa go’aan ka gaaraya in “astaanta” xayawaanku ay si guud u muuqdaan iyo in kale!
Sida caadiga ah, faahfaahinta xiriirkaaga cidna uma muuqan karto!
Xogtaada waxay ku keydsan tahay adeegeena SSL-ka ah ee la duubay!
Noocyada xayawaanka waxaa la soo bandhigaa oo keliya raadinta u dhiganta ka dib!
KELIYA xogta waa la raadin karaa, la heli karaa lana soo bandhigi karaa INAAD sii deyso!
Websaydhka iyo hawsha raadinta waxaa lagu heli karaa adduunka oo dhan 109 luqadood!
OK, laakiin hadda waxa ugu muhiimsan!
Xitaa ma loo baahan yahay in la galiyo meel xayawaan ah?
Hagaag, waxay kuxirantahay wadanka aad ku nooshahay iyo dabcan xayawaanka aad leedahay.
Wadamada qaarkood waa qasab in la siiyo eey kasta oo ka weyn 6 bilood transponder, sidoo kale badanaa loo yaqaan microchip. Wadamo badan, dhanka kale, kaliya eeyaha eyda lagu tilmaamay inay “khatar” yihiin ayaa u baahan jab. Markaa haddii xayawaankaagu u baahan yahay ama uusan u baahnayn microchip waxay kuxirantahay arrimo badan oo sharci oo kaladuwan.
Sida milkiilaha masuul ah oo xayawaan, waa in aad wali ha ku farxo, in eey, bisad, bakayle ama faras, isticmaali chip transponder ah, maxaa yeelay, “wanaagsan oo ammaan badan ka xumahay” .
Weydii dhakhtarkaaga xoolaha lambarka 15-ka lambar ee qalabka wax lagu beddelo oo geli waxyaabaha aad ugu jeceshahay keydkeena.
Dabcan looma baahna in xayawaankaaga xayawaanku leeyahay microchip uu ku soo galo halkan. Maaddaama mashiinkeenna raadinta casriga ahi uu aqoonsan yahay tiro badan oo algorithms ah, ma raadin karo oo keliya tirada qalabka wax lagu beddelo, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa nambarada tattoo ama lambarrada cashuurta iyo xitaa astaamaha gaarka ah ee xayawaanku leeyahay. Mashiinkayaga raadinta ayaa awood u leh inuu helo dhammaan xogta aad gasho oo ku taxo natiijooyinka raadinta. Weli waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa xogtaada shakhsi ahaaneed, maxaa yeelay kaliya xogta aad sii deyso ayaa la daabici doonaa.
Marka maxaad ugu dari kartaa gacaliyahaaga keydkeena?
Jawaabta tan waa mid fudud, maxaa yeelay websaydhkeena waxaa lagu heli karaa 109 luqadood mana jiraan keyd kale oo xayawaan ah oo siyaabo badan loo helo oo toos loola xiriiro sida xarunta chip. Gacaliyahaaga ayaa ka muuqda inta badan keydka macluumaadka ee maxalliga ah, laakiin haddii tan ugu liidata ay timaaddo tan ugu xun, waa inaad marka hore la xiriirtaa hawl wadeenka keydka macluumaadka, ka dibna u sheega milkiilaha xayawaanka in xayawaanka la helay.
Runtuna waxay tahay inta badan kiisaska waxay qaadataa waqti dheer, maxaa yeelay waa dhammaadka usbuuca, shaqaalihii mas’uulka ka ahaa fasax, xanuun ama fasax ayuu galay, waqti aad u qaali ahna wuu dhaafaa , waqtigaas oo xayawaankaagu kula joogay waqti dheer kari lahaa. Hadana, haddii Eebbe inaga reebo, “kiiska ugu xun” waa inuu dhacaa, xitaa waxaad leedahay ikhtiyaar aad ku dejin karto xaaladda xayawaankaaga “La’yahay” kaydkeenna , taas oo isla markiiba ku tusaysa qaybta “XAYAWAANNADA LA’AAN” , iyo astaanta ay ku jiraan kaagu Macluumaadka xiriirka sidoo kale waa isla markiiba la arki karaa booqde kasta oo websaydhka Chipzentrale ah .
Haddii aad eegto bogga demo, xayawaan la helay ayaa ka muuqan doona natiijooyinka raadinta iyo bogga “Xayawaan La La’yahay” . Halkan guji si aad u tagto bogga muunada loogu talagalay xoolaha maqan
Ku darista ugu weyn ee xarunta chip
Waxaad ku keydin kartaa xog badan oo xiriir ah kaydkeena, kuwaas oo isla markiiba la arki karo isla marka uu xayawaankaagu ka muuqdo natiijada raadinta. Dabcan, dhammaan macluumaadka waa iskaa wax u qabso , gal inta aad rabto ama aad u yar tahay. Markaad iska diiwaangelineyso markii ugu horreysay Chipzentrale, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad geliso magaca isticmaale ee aad dooratay , cinwaanka e-maylkaaga iyo magaca xayawaankaaga. Kaddib diiwaangelinta guuleysta waxaa laguu gudbin doonaa koontadaada gaarka ah. Koontadani waa mid sir ah oo la ilaaliyo adiguna waad heli kartaa oo aad tafatiri kartaa. Koontadan, “astaantaada”, waxaad ku qori kartaa xogta xayawaankaaga iyo dhammaan macluumaadka xiriirka ee aad rabto inaad ku bixiso ikhtiyaari ahaan.
Waxaad ku qori kartaa xogta soo socota keydkeena:
Macluumaadka ikhtiyaariga ah ee ku saabsan xayawaanka: da’da, noocyada, noocyada, Aqoonsiga qafiska, nambarka canshuurta, tirada tattoo, jinsiga, midabka, astaamaha gaarka ah sida qoraalka bilaashka ah.
Macluumaadka iskaa ah ee uu bixiyo milkiilaha ee ogeysiinta xaaladaha degdegga ah: magaca, lambarka taleefanka, lambarka taleefanka gacanta, cinwaanka, cinwaanka emailka kale, boggaaga gaarka ah, astaamahaaga ku jira warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Instagram, laakiin sidoo kale Skype ID, Youtube, SoundCloud ama VKontakte.
Way adag tahay in xog kale oo kasta oo xayawaan ah ay bixiso adeeggan, iyo sida ay muhiimka u tahay tani natiijooyinka ka soo baxay xaqiiqda ah in Jarmalka, Awstaraaliya iyo Switzerland oo keliya dhowr boqol oo kun oo xayawaan ah la waayo sannad kasta. Waxaa lagu qiyaasaa in xitaa la rumeysan yahay inay tahay adduunka oo dhan
In ka badan 5,000,000 ( 5 milyan ) xayawaan ayaa la waayey sannad kasta.
Dareenkan cajiibka ah ee haysashada saaxiib …
Nasiib darrose, runta murugada leh ayaa ah in tiro badan oo xayawaan ah la soo sheego maalin kasta.
Dhammaantood ma ahan wax shil ah, maxaa yeelay xayawaanka badankood waxay mar kale ka soo baxaan mar uun jardiinooyinka hore, guryaha xayawaanka, ururada daryeelka xoolaha ama rugaha caafimaadka xoolaha. Si kastaba ha noqotee, xayawaanno badan, gaar ahaan eeyaha iyo bisadaha, waxaa qabta kuwa xayawaanka qabta ee loogu yeero “maafiyada xoolaha” ka dibna waxaa lagu siiyaa iib mar kale marinnada mugdiga ah iyo suuqyada kala duwan ama joogsiga weyn ee gawaarida.
Akhristaha qalabka elektaroonigga ah ee xayawaanka
Waxa ugu fiican ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda xayawaanku ay inta badan ku maqnaadaan meelahaas, oo ay had iyo jeer la joogaan qalab elektaroonig ah oo akhriste ah. Markaa haddii xayawaankaagu leeyahay aaladda loo yaqaan ‘transponder chip’ oo la beeray oo tan lagu akhriyo goobta, ilbidhiqsi kasta runtii waa la tirinayaa si loo ogaado aqoonsiga milkiilaha ka dibna lala xiriiro DEG-DEG , xitaa ka hor inta aysan tuugadu ka bixin goobta oo xayawaankaaga laga yaabo inuu weligiis baaba’o .
Laakiin halkan waa halka dhibaatada dhabta ahi ka jirtaa, maxaa yeelay xog-ururin intee le’eg oo xayawaankaaga ka diiwaangashan ayaa ku habboon dhakhtarkaaga. Caadi ahaan, xayawaankaaga xayawaanku wuxuu ka diiwaangashan yahay mid ka mid ah macluumaadka badan ee baahinta badan, ee maxalliga ah, sidaa darteedna ficil ahaan macquul maaha in laga helo adduunka intiisa kale, maadaama dhammaan xafiisyada diiwaangelintu aysan isku xirneyn oo runtiina aysan si fiican u wada shaqeynayn midba midka kale.
Sababtaas awgeed aad ayey muhiim u tahay inaad ugu jeceshahay bartamaha, adduunka oo dhan lagana heli karo oo laga heli karo 109 luuqadood oo xog-ururin ah sida diiwaankayaga. Sababtoo ah aan runta ka hadalno, dhakhtarka xoolaha tusaale ahaan Hungary, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Italy, Spain, USA, Mexico ama meel kasta oo kale ayay dhibaato ka haysataa helitaankooda kaydinta macluumaadka luqadda Jarmalka ama keydka ee ku qoran luqad isaga u gaar ah. Taas ka sokow, wuxuu dhibaato kala kulmi doonaa sameynta weydiinta keydka macluumaadka kadibna wuu aqrin karaa natiijooyinka.
Laakiin waa ku filan tahay sumadda madow, maxaa yeelay warka wanaagsan ayaa ah in dhaqan kasta oo caafimaadka xoolaha ah, hoy kasta oo xayawaan ah, urur kasta oo ka shaqeeya daryeelka xoolaha, iyo sidoo kale dad badan oo u ololeeya xuquuqda xayawaanka gaarka loo leeyahay ee adduunka oo dhan ay leeyihiin akhristaha elektaroonigga ah ee elektaroonigga ah. Lambarka aqoonsiga ee ka kooban 15 lambar jajabkan oo sidan loo akhriyay , waxaad ku ogaan kartaa milkiilaha xayawaanka la helay oo leh dhammaan faahfaahintiisa xiriirkiisa keydkeena xogta daqiiqado gudahood adoo adeegsanaya internetka, meel kasta oo adduunka ka mid ah iyo dabcan isla markiiba ogeysii in la helay qofka uu jecel yahay. . Sababtoo ah qof kasta oo xayawaan leh ayaa og in aysan jirin wax dareen ah oo ka wanaagsan inaad maalkaaga nabdoon ku haysatid markale.
Ku dar gacaliyahaaga keydkeena hada.